Homemade Chicken Nuggets Recipe | Kicheni Mapepa
Huku chikafu chakanyanya yakakurudzirwa kune vadiki vari mumba sezvo iri chena uye yakapfava nyama kwavari. Uye zvakare, nekuda kwekukwanisa kwayo kuita zvakawanda tinogona kugadzira zvisingaperi mabikirwo nechikafu ichi, asi zvipenga zvinosarudzwa nemunhu wese.
Iyi kamukira yeRussia steaks kana zvigadzirwa kanaa Homemade iri nyore kwazvo kugadzira uye, pamusoro pezvo, tinogona kugadzira huwandu hwakawanda kuti tikwanise kudziomesa, saka zvishandise mune chero kudya kwekukurumidza kwemhuri yese. Chikafu chakanakisa chatinogona kuperekedza chero muto.
1 clove gariki.
1 rese huku zamu.
Chekutanga pane zvese, isu tinotora iyo huku zamu uye isu tichaichekerera mudiki diki. Zvirinani kuzvicheka nebanga pane nekucheka ginhi seizvi hazvirambe zvakanyorovera.
Tichaisa izvi mundiro uye wobva wawedzera iyo mbishi minced gariki, zai, parsley uye munyu. Tichasanganisa zvakanaka kusvikira bundu riwanikwa. Kana iyo bundu iri yakanyorova isu tinowedzera zvidimbu zvidimbu zvechingwa kuti chiite chimwe chinhu chinowirirana.
Mushure mezvo, isu tinotora zvidimbu zvidiki zveuyu mukanyiwa togadzira mabhora atinozopwanya kupa iwo hunhu chimiro cheRussia steaks kana nuggets.
Pakupedzisira, tichapfuura hupfu, zai rakarohwa uye makeke ezvingwa uye isu tichakanga mune yakawanda inopisa mafuta. Tichatora kana dzaita brown yegoridhe uye isu tinodhonza pamapepa anopinza.
Nguva yekugadzirira 20 maminitsi
Nguva yekubika 10 maminitsi
Yese nguva 30 maminitsi
Kilocalories pakushanda 352
Nyore Mapepa, Tapas uye Skewers
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Special Recipes » Nyore Mapepa » Homemade Chicken Nuggets
Soletilla mabhisikiti, ehupenyu hwese
Homemade rice pudding ice cream